Filtrer les éléments par date : mercredi, 04 décembre 2019
mercredi, 04 décembre 2019 22:03
« By Pass »: Ho ferana ireo fanotofana tany
Nisy Filankevitry ny Minisitra androany, namaritra ny famerana ireo fanotofana tany atao manemitra ny làlana « By Pass », izay « tsy maintsy handraisana fepetra entitra tsy ho ela ».
Nanchang-Chine: Hody ry Ragôva fa tsy araka ny noeritreretina ny Seminera nanasana azy ireo
Tsy fiofanana sy fifandraisana ara-barotra araky ny niheverany azy ny seminera (Séminaire de haut niveau sur les Responsables des Gouvernements locaux) nanasan’ny governemanta Sinoa, fa seminera miompana betsaka amin’ny fampahafantarana ny Chine, indrindra ny fahombiazany ary ny tanjany ara-toekarena.
Efa amam-bolana no nanomanan-dry zareo Sinoa ity Seminera ity ary saika mpampianatra amin’ny oniversite no manao famelabelarana nefa ry Ragova fiaraha-miasa sy fisintonana Sinoa mpandraharaha ho avy hampiasa vola amin’ny Faritra sahanin’izy ireo avy no niomanana.
mercredi, 04 décembre 2019 21:16
Filankevitra ambonin’ny Mpitsara: Voatendry ho Sekretera Jeneraly Ranadalison Angelo
Noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra androany ny didim-panjakana fanendrena an-dRanadalison Angelo ho Sekretera Jeneralin’ny Filankevitra ambonin’ny Mpitsara.
mercredi, 04 décembre 2019 21:04
Tsipahin'ny orinasa SOBA, mpanao savony, aty Antsirabe ny filazan'ny SIM (Sendikan’ny Indostria eto Madagasikara) fa vokatra efa voahodina no hafaran'izy ireo avy any ivelany, ilay antsoina hoe: « bondillion », hanamboarana savony. Nasehon'ny orinasa SOBA ny mpanao gazety ny fanamboarana savony tao aminy.
Toherin'izy ireo ny fangatahan'ny SIM ny hampakarana ho 20% ny habantseranana amin'ny fampidirana ny akora fototra fanaovan-tsavony satria hampiakatra ny vidin-tsavony izany, ka ny vahoaka maro an'isa no hizaka izany.
mercredi, 04 décembre 2019 17:46
Fako: Velon-taraina ireo mponina ambodin’Isotry
Velon-taraina ireo mponina ambodin’isotry sy ny manodidina noho ireo fako mivangongo eo amin’ny manodidina, na dia efa noraofin’ireo tompon’andraikitra aza ny ampahany amin’ireo fako ireo dia tsy nahafa-po ny mponina izany, satria mbola maro ihany ny fako mitobaka eo.
Mangataka araka izany izy ireo ny mba hanalana ireo fako ireo satria dia miteraka aretina maro ny fijanonany eo, ny mpivarotra hani-masaka izay eo akaiky eo ny toerana fivarotany hany ka maro ireo olona, indrindra ny ankizy no tratran’ny aretin-kibo.
Mandoa hetra ara-dalàna izahay, hoy ireo mponina, ka nahoana no avela anaty loto toy izao hatrany, ny ranon'orana ihany koa efa ho avy.
mercredi, 04 décembre 2019 17:29
Feno Harison: « Ny fampitahana ny lisi-pifidianana no ahitana ny fahamarinana »
Herinandro taorian’ny latsa-bato tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna sy Mpanolontsain’ny tanàna natao ny 27 novambra 2019, dia nanao fanambarana tao amin’ny pejiny Facebook i Feno Harison milaza fa « Ny fampitahana ny lisi-pifidianana no ahitana ny fahamarinana ».
Kandida tsy miankina tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna teto Antananarivo Renivohitra i Feno Harison. Niisa dimy ireo kandida teto an-drenivohitra.
Tato anatin’ny herintaona izao dia mijaly vao mahazo karama ny Mpiasa mpandraharaha ato amin’ny Oniversiten’Antsiranana, ary mbola mitohy hatramin’izao.
Ny olona nandeha nisotro ronono tamin'ny 2016 aza, hoy ny fitarainan’ny mpiasa, dia tsy mbola mandray vola fisotroan-dronono hatramin'izao. Rehefa nanontaniana ny tompon’andraikitra ara-bola dia nilaza fa « tsy mbola tapaka ny karaman'ireo » nefa tsy voarain'ny tompony.
Mitokona ny mpiasa, mitaky ny tambin-kasasarany sy ny sosialiny.